ओली सरकार १० महिनामै थला पर्‍यो ! – Rara Khabar
ओली सरकार १० महिनामै थला पर्‍यो !
अहिले सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पार्टी जीवनको आन्तरिक समीक्षामा जुटेका छन् । दुवै पार्टी गरमागरम बहस र छलफलमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावविरुद्ध पूरक प्रस्तावको चाँङ लागेको छ । अर्को तर्फ प्रतिपक्षी कांग्रेसको महासमिति बैठकमा विधान संशोधसँगै हिन्दु राज्य राख्नु पर्ने विषयमा हस्ताक्षर क्याम्पियन नै चलेको छ ।
एक लाख डलरकाे पुरस्कारले प्रधानमन्त्री सम्मानित
राष्ट्रिय गौरवको आयोजन बुढीगण्डकी जलविद्युत यतिबेला खेलौना जस्तो बनेको छ । विज्ञहरुको नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने मत रहेका बेला सरकारले बुढीगण्डकी परियोजनालाई विवादास्पद छविको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दियो । भारत, चीन वा नेपाल आफै कसले बनाउने भन्ने विवादबीच सरकारले यो निर्णय गर्‍यो । बुढीगण्डकी बनाउन प्रति लिटर इन्धन बिक्रीमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने व्यवस्था गरिएको थियो । कहिले चीन कहिले भारत त कहिले नेपाल आफैले बनाउने भन्ने परिरहेको परियोजना पूववर्ती सरकारले आफै बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले थुप्रै काम अगाडि बढी सेकेको अवस्थामा गेजुवालाई सुम्पियो ।
नेकपाको अमूर्त निर्णयले जनमतको अपमान गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेका नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई संसद् बाहिर रहन मनै मानेन । चुनाव हारे पनि संसद छिर्न डोल्पाका धनबहादुर बुढा, दैलेखका रवीन्द्र शर्मा, बैतडीका दामोदर भण्डारी, बाँकेका नन्दलाल रोकाया, प्युठानकी दुर्गा पौडेल, नवलपरासीका तिलक महत, रोल्पाकी कमला रोकालाई राजीनामा गराउने प्रयास गरे तर सफल भएनन् ।
त्यसपछि उनले काठमाडौं–७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई जाल हाले । उनको राजीनामालाई लिएर नेकपाभित्र र आम नागरिकले आलोचना गरेपछि वामदेव आफै चुनावबाट पछि हटे । देशभर करिब १८ अर्ब अर्थात प्रति निर्वाचन क्षेत्र करिब ११ करोड खर्चेर वर्षदिन पहिले मात्रै सम्पन्न भएको चुनावमा हारेर पनि उनीले फेरि र्‍याल काढेपछि सरकार र नेकपाको साख गिराउन थप मद्दत पुग्यो ।
‘न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव र दवाव दिनु हुँदैन’
डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच लामो रस्साकस्सी पश्चात चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमाथिको छलफलका साथै ऐन बन्ने अवस्था गुम्राहामा रहेका बेला डा. केसीले पुनः १६औँ अनशनको चेतावनी दिएका छन् । सरकारले निजीकरण भएको चिकित्सा शिक्षालाई सरकारी तथा सामुदायीकरण गर्नु त परै जाओस् केसीले उठाएको माग पूरा गर्ने सामथ्र्य देखाउन सकेको छैन ।
जागिरलाई केन्द्रमा राखेर अब शिक्षा नीति बन्दैन: शिक्षामन्त्री
संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको भाग–३ को ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने छन् । समाजवाद स्थापनार्थ न्युनतम शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत निःशुल्क हुनुपर्ने हो । कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा ‘समाजवाद’ शब्दप्रति विशेष रुझान हुने नै भयो । तर, सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादका आधारभूत मापदण्ड निर्माणको अवस्था हेर्दा संविधानका अक्षर एकातर्फ, सरकारको गति अर्कोतर्फ देखिन्छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीकै अरुची रहेको समाचार सार्वजनिक भए ।
संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारमा जताततै नेकपाको वर्चश्व भएको बेला समानुपातिक÷समावेशिताको खिल्ली उडाउँदै ‘एनजीओ’को ट्याउँट्याउँ भनेको पनि ताजै छ । संसदमा सांसदहरुले नुनभुटुनको भाउँ बढ्यो भनेपछि ओलीले ‘सानो हुँदा ५० पैसा माना घ्यू, ९० रुपैयाँ तोला सुन आउँथ्यो । अब अहिले त्यो भाउ निकै बढिसक्यो, साथीहरुले तीन महिनाको मात्र हिसाब गर्नुभएछ’ भनेर जवाफ दिएर गैरजिम्मेवारीको स्तर देखाए । संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै कर्मचारी समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी, वाइडबडी काण्ड, सुन तस्करसँग विदेशमा प्रहरी प्रमुखको उठबस आदि घटनाले पनि सरकारको समाजवादी गतिलाई गिज्याइरहेकै छन् । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मितिः ६ पुष २०७५, शुक्रबार ०६:१५